शिल्पा र पृथ्वीको ‘मायामा बियर परेछ’ ! (भिडियो) « Ramailo छ
शिल्पा र पृथ्वीको ‘मायामा बियर परेछ’ ! (भिडियो)
फिल्म ‘वीराङ्गना’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘मायामा बियर परेछ’ बोलको गीतमा नायिका शिल्पा पोखरेल र नायक पृथ्वी राज प्रसाईंलाई रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत भएका छन् । दिपक शर्माको संगीत र रघु परियारको शब्द रहेको तिम्रो हाम्रो मायामा बियर परेछ बोलको गीतमा कृष्ण काफ्ले र रेश्मा पुनको स्वर रहेको छ । भिडियो हेर्नुस् :
सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी रहेको गीतलाई रामेश्वर कार्कीले खिचेका हुन् । राजबहादुर सानेको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म वीराङ्गना फोर्थ आई मुभिजको ब्यानरमा बाबुराम दास, श्यामबहादुर थापा, रघु परियार, देव तामाङ र बिमला भट्टले निर्माण गरेका हुन् । सुमी चामलिङ राई सह निर्माता रहेका छन् ।
नारी प्रधान एक्शन लभ जनरामा निर्माण गरिएको फिल्ममा शिल्पा र पृथ्वीका सँगै अनुपविक्रम शाही, प्रज्वल गिरी, प्रिया रिजाल, धिरेन शाक्य, सुशील पोखरेल, कृष्ण शिवाकोटी, ध्रुव कोइराला, अंशु थापा, अमृत सापकोटा लगायतको अभिनय रहेको छ । वीराङ्गनाको यश अघि तिमी पुलिस म नि पुलिस बोलको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
फिल्ममा कविराज गहतराजको पनि नृत्य छ । यस्तै श्री श्रेष्ठको द्धन्द निर्देशन रहेको छ । फिल्मको वितरणको जिम्मा काठमाडौंमा बि के फिल्मस्का गोपाल कायस्थ र काठमाडौं बाहिर एफडि कमपनीले लिएका छन् । फिल्म असार २९ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ ।